China ubuso mqengqeleki Massager-02 mveliso kunye mveliso | UWangtong
Ikristale epinki ikakhulu ikhulisa intliziyo ye-chakra, yomeleza impilo kunye nokusebenza kwemiphunga impilo.Ingayekisa uxinzelelo, inciphise imeko yokucaphuka, incede ungene nzulu entliziyweni, uzifumanise kwaye uphucule ukuqonda. inokukunceda ukuphucula ubudlelwane bakho kunye nokonyusa unxibelelwano lomntu kunye neshishini.
Izinto jade mqengqeleki ukunceda ulusu ukugcina somelele, ngaloo ndlela ukufikelela isiphumo ukuphelisa mibimbi, ukuxhathisa ukwaluphala, ukunciphisa umzimba ebusweni, nokuqinisa.
Olu hlobo lwe-roller lwehlisa isikhumba sendawo yobuso emva kokubambisana nokuthanjiswa, yenza ulusu lugcine luqinile. Ukongeza kwimassage, ukhathalelo lolusu lukwanokusebenzisa i-roller ukukhawulezisa ukufunxwa, xa uphuma ungathatha i-capsule ye-essence, nge-roller massage kwi-essence.
Indima ephambili yejade roller kukukhuthaza ukujikeleza kwegazi ebusweni, ukuthambisa inkqubo ye-lymphatic, ukunceda imetabolism yeseli, nayo inokunciphisa ukudumba, ukuphucula ukuphumla kolusu.
Xa ukukhuhlana kolusu kuya kukhuthaza ukujikeleza kwe-lymphatic kwesikhumba, ukunceda ulusu ukuba lufezekise umphumo wobuso obucekeceke.
Iingcebiso: Ngaphambi kwesondlo, yenza umsebenzi ococekileyo wokucoca i-horny.
Unokusebenzisa amanzi afudumeleyo ukuntywila, ngokusebenzisa i-jade yokuqhuba kwe-thermal, ukomeleza ukujikeleza kwegazi.
Ukongeza, inebhodi yokutsala ehambelana nayo, ukongeza kwisithambiso sobuso, inokusetyenziswa njengokukhuhla ingalo, inefuthe lokususa ukungcoliswa kokufuma emanzini. umama wobuncwane.
Le yimveliso yenqanaba lobuncwane, nokuba ngabafundi, abasebenzi baseofisini, okanye umama wobuncwane, ifanelekileyo
Ukusetyenziswa kwe-jade roller, kwaye sisebenzisa ezinye izixhobo zobuhle ziyafana, ngaphambi kokusebenzisa ukusetyenziswa kokuqala kokuthambisa okanye iimveliso zeoyile kulusu, ukunciphisa ukutsala kwesikhumba.
Isiqalo esilandelayo ukusuka kwindawo ye-clavicle, ukusuka ezantsi ukuya phezulu, ngokuthe chu ukuya esilevini nasentanyeni, ngokomyalelo webhulorho yempumlo, imilebe, izidlele, ibunzi, kwaye ekugqibeleni uqinise isitshixo esweni.
Xa uphulula, ulwalathiso oluqengqelekileyo kufuneka ligcine ngaphezulu nangaphandle, tsala ubuso ukunqanda ukutsala ezantsi ukuvelisa imigca emihle.
Ibhodi yokukrola yeJade inokukunceda ukuba ube nobuso obunqabileyo.
Kwaye kulula ukuyiphatha, nangaliphi na ixesha kwaye naphina kunokusetyenziswa, ukuhlala ixesha elide kungathatyathwa ukuze kuhlanjululwe intamo kunye negxalaba, phumlisa umzimba nengqondo, vumela ukhululeke ukonwabela ukonwaba komzimba kunye nengqondo.
Okulandelayo: Ubuso beRoller Massager
Ubuso beRoller Massager